လက်သည်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို - ဆေးမှုတ်, ဒီဇိုင်း, ပန်းချီ, monograms များအတွက်
တစ်နောက်ပြီးတစ်ခုဟာဖယောင်းစက္ကူကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လို - လက်သည်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူ?
လောကီသားတို့သည်အခုနှစ်မှာ လက်သည်းပန်းချီ အဆက်မပြတ်အားလုံးအခါသမယများအတွက်ဒီဇိုင်းကို options အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးသောနည်းပညာ, တိုးတက်အောင်နေကြသည်။ သငျသညျစစ်မှန်တဲ့လက်ရာကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့လက်သည်း, များအတွက်အထူးဟာဖယောင်းစက္ကူသုံးပြီးဒီတော့မကြာခဏမာစတာလက်သည်းပန်းချီ။
လက်သည်းဒီဇိုင်းကိုအထူးဟာဖယောင်းစက္ကူတစ်ဦးဿုံချောမွေ့့ရှေ့၌ရေးဆွဲဖန်တီးရန်မော်ဒယ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအလွတ် disc ကိုသို့မဟုတ်ကော်ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤကိရိယာများအလွန်မာစတာ၏လုပျငနျးလွယ်ကူချောမွေ့, နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆောင်ကာလ၌သိသိသာသာလျှော့ချရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရလဒ်အမြဲတမ်းအမှတ် - ထိုပုံ၏လိုအပ်သောပုံစံများနှင့်ဒြပ်စင်ဿုံပြားချပ်ချပ်ရရှိသောနှင့်မင်းသမီးကိုင်တွယ်ကြသည် - ကောင်းစွာ-ဆောင်ဖို့နဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ ယနေ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်တင်ပြလက်သည်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌အခြားသူများကိုဒါကျွမ်းကျင်နှင့်အတွေ့အကြုံလက်သမားလက်သည်းပန်းချီနဲ့နှိုင်းယှဉ်င်း၏အားသာချက်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောမော်ဒယ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
လက်သည်းပေါ်တွင်ဆေးထိုးခြင်းမှဗီနိုင်းဟာဖယောင်းစက္ကူ - လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသော Device များတစ်ခုမှာ။ ၎င်း၏လျှောက်လွှာ၏ထိုအချိန်ကလုံးဝဒါတိုင်းမိန်းကလေးအလွယ်တကူအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောတိများနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တစ်စုံတစ်ရာအရိပ်ဖုံးလွှမ်းအရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ်ဂျယ်လ်အရောင်တင်ဆီဖြန့်ဖယ်ထုတ်လိုက်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဗီနိုင်းလက်သည်း၏ပန်းချီဘို့တင်းပလိတ်များ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်မျိုးပေါင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခွန်အားနှင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်ကိရိယာ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်နိမ့်သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး manicurist နှင့်သာမန်ဖက်ရှင်အဖြစ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ချစ်သူများနှစ်သက်သေချာအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်အသီးအသီးအစုံနှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဆက်ခံအတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုရသောလက်သည်းအဘို့အ metal, ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ဆီလီကွန်ဟာဖယောင်းစက္ကူ, ထိုကိန်းဂဏန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အတူပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီလက်သည်းပန်းကန်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကိုဆွဲမှာအထူးလာကြတယ်သုံးပြီးဖျော်ဖြေနေသည်။ လက်သည်းအဘို့အခေတ်သစ်ပြန်သုံးနိုင်သောဖယောင်းစက္ကူအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လိုအပ်သောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လေးလည်း၏အပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်ပညာရှင်ပီသစွာခြယ်သတဲ့နောက်ပြီးနှင့်လက်သည်းပန်းကန်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာသခင်ထံမှပင်မထကြဘူး။
ထိုကဲ့သို့သောပြားအားဖွငျ့ပုံစံများလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်, တကအချို့သောကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဟာဖယောင်းစက္ကူ, သုံးပြီးလှပမူရင်းလက်သည်းဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်, သင်ပန်းကန်ပေါ်အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ်ဂျယ်လ်လက်သည်းလျှောက်ထားရန်မလိုအပ်, ပြီးတော့ပျော့ပျောင်း spatula နှင့်အတူပိုလျှံဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အဲဒီနောကျပုံစံအချို့ပုံစံဒြပ်စင်အတွက်သူတို့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခြေသည်းပေါ်မှာပုံနှိပ်အတူတူတံဆိပ်ခေါင်းကို အသုံးပြု. တစ်တံဆိပ်ခေါင်းပြောင်းရွှေ့ရပါမည်။
လက်သည်းပန်းကန်မှလျှက်ရှိကြောင်းစတစ်ကာများလျှောမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းလျက်, သူတို့အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အမှန်တကယ်အထင်ကြီးဖြစ်ပါသည် - ဖယောင်းစက္ကူနဲ့နောက်ပြီး, လိမ်းဆေးလက်သည်း, အလက်ခြယ်သမှုတက်ကြွလာသည်, ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအမြဲသူတို့တစ်တွေသည်အထူးစတစ်ကာမဟုတ်ကောင်းတဲ့နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံဆွဲရင်ဆိုင်ရကြောင်းအသိအမှတျမပါဘူး ဒဏ်ငွေဖြီးသုံးပြီးအပ်နှံ။
slider ဟာဖယောင်းစက္ကူဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သော devices တွေကိုတခြားအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်:
ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးအတွက်ပေးအပ် - ဆိုအရောင်ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့စတိုင်နိုင်ပါတယ်;
မေးခွန်း, လက်သည်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် device ကိုမဆိုမျိုးကိုသုံးတဲ့အခါဖက်ရှင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အဆိုပါနေမှုကိုချေဖျက် technique ကိုရယူသုံးအတွက်ကြုံတွေ့အခက်အခဲများ၏ဤအတောအတွင်းအများဆုံး။ : ဤနည်းပညာကိုသုံးစွဲဖို့, သင်ကဲ့သို့သောအချို့သောအထူးကိရိယာများ, မဝယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်နှင့်အတူ coated သတ္တုအလွှာ၏ disc ကို;
အဆိုပါ workpiece ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပိုလျှံယွန်းအဖြစ်အပျက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ခြစ်သို့မဟုတ် Scarperia;
အထူးပြုဆေးသုတ် viscous ကိုက်ညီမှု။
ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုလိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် degrease ပေးခြင်း, ထိုပန်းကန်ကိုချွတ် file ။
ထို့နောက်အဆိုပါ disk ကိုတစ်ဦးအထူးပြုဆေးသုတ်-အရောင်တင်ဆီဝစွာပုံစံ၏အကူအညီနှင့်အတူပိုလျှံ Scarperia ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ခေတ်သစ်နည်းပညာများတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြသနိုင်သည့်နှင့်အတူလက်သည်းပန်းကန်ပေါ်တောက်ပပြီးလှပပုံများ, ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ အထူးသဖြင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများဖြောင့်လိုင်းများကလွှမ်းမိုးနှင့်အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်ကိုအရွယ်အစားဿုံတန်းတူသော, ရရှိခဲ့ကြသည်။
ယင်း၏စုံလင်နှိပ်, အဆင်းလှသောနောက်ပြီးကို run ပါကအထူး devices များအားဖွငျ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, ခြေသည်းအပေါ်တပ်မက်လိုချင်သောပုံစံဖန်တီးအပေါင်းတို့နှင့်လိုအပ်သောအချိုးအစားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုကူညီလက်သည်း airbrushing ဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံရိပ်၏အနားအတိအကျမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံနှင့်အခြားအလားတူဒြပ်စင်ဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နောက်ပြီးအထူးဟာဖယောင်းစက္ကူအတိအကျတူညီနှင့်အတူအသီးအသီးလက်သည်းပေါ်တွင်အပြုံးလိုင်းခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့လှပတဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းလက်သည်းပန်းကန်၏လွတ်လပ်သောအစွန်း၏အထူသို့မဟုတ်အကျယ်အတွက်မဆိုမူကွဲဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, နှင့်ဒီကိရိယာထိုကဲ့သို့သောအမှားရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။
ပြင်သစ်နောက်ပြီးဖန်တီးရန်အသုံးပြုလက်သည်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူတစ်ဦးဂန္နှင့်ဿုံချောမွေ့, ဒါပေမယ့်လည်း, Semi-မြို့ပတ်ရထားတြိဂံသို့မဟုတ်ပင်ဖန်စီနိုင်ပါတယ်မသာ။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, တံဆိပ်ခေါင်းများ၏အနားကွပ် openwork သို့မဟုတ်ဇာ, နေသေးတယ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေသည်အထူးအခါသမယများအတွက်တောက်ပနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီနည်းလမ်းကိုအဓိကအရေးကြီးတဲ့နေ့၏မျှော်လင့်မှာသူတို့ရဲ့ခြေသည်း decorating စဉ်းစားကြသူထိုလူငယ်သတို့သမီး၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းပန်းကန်ပေါ်မှာလှပမရနိုင်ပါဘူး monogram Draw - ကအလွန်ခက်ခဲသည်။ တောင်မှအတွေ့အကြုံရှိလက်သမားလက်သည်းပန်းချီအရင်ကဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်လက်သည်းပေါ်တွင် monograms များအတွက်အထူးဟာဖယောင်းစက္ကူသုံးပြီး, သင့်အသက်တာကိုလွယ်ကူချောမွေ့ဒါအမြဲဤပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာနေမှုကိုချေဖျက်များအတွက် tool ကိုဆင်တူသို့မဟုတ်တစ်ဘုံတံဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
လနောက်ပြီးအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူကိုလည်းအလွန်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်နှင့်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖက်ရှင်အမျိုးသမီးအရင်ကဆိုရင်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတူတူပင်အရွယ်အစားနှင့်အထူ၏တွင်းဆွဲရန်အရေးကြီးပါသည်ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းဖန်တီးတဲ့အခါ, ဒါကြောင့်အထူးရေးကိရိယာများကိုအလွန်ကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ လက်သည်းအလှဆင်လဒီဇိုင်းအဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူအားသာချက်သို့သော်တြိဂံသို့မဟုတ်စတုဂံဂျလည်းရှိပါတယ်, တစ်ဦး semicircular ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။
လက်သည်းအလှဆင်ဘို့ဟာဖယောင်းစက္ကူအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့နိုင်ပါတယ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းသူတို့ကိုသုံးပါ - ဒါကြောင့်ခိုင်မြဲစွာကပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ် တံဆိပ် ညာဘက်အရပ်ဌာန၌တပ်မက်လိုချင်သောပုံစံမှ, ပြီးတော့တစ်ဦးသင့်လျော်သောအပေါ်ယံပိုင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာတင်ထား၏။ တစ်ပြူးသောအဘို့ကိုအရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ်ယွန်းဂျယ်အခြားအရောင်နှင့်အတူ coated ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော devices တွေကိုသုံးတဲ့အခါယေဘုယျအားဖြင့်, သို့သော်အချို့သောကိစ္စများတွင်ပါကလုံးဝလက်သည်းပန်းကန်၏မျက်နှာပြင်၏အခြေခံသေံနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်လိမ့်မည်။
နောက်ပြီး "ဂျီသြမေတြီ" ဟာဖယောင်းစက္ကူ
အချို့ကိစ္စများတွင်လက်သည်းပေါ်တွင်ငါးပိဟာဖယောင်းစက္ကူအထူအတွက်ချောမွေ့နှင့်ယူနီဖောင်းစုံလင်လိုင်းများရနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ် manicure ။ အမျိုးသမီးများနှင့်၎င်းတို့၏ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်လိုင်းများချောမွေ့၏မိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်တဲ့ဂျီဩမေတြီဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးသောအခါဤသည်မသိမသာကွဲပြားအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပုံစံများလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုနှစ်ဦးစလုံးမင်းသမီးနှင့်မာစတာလက်သည်းအနုပညာ, အချိန်ကုန်သက်သာ, အလွန်အလုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသောဒီဇိုင်းကိုလက်သည်းပန်းချီလောကီသားတို့သည်ထင်ရှားအလှဆင်လက်သည်းများအတွက်မူရင်းဟာဖယောင်းစက္ကူအလွန်ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ပေမယ်ပြီးသားမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကြီးမားတဲ့ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ထိုကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပင်လုံးဝအတွေ့အကြုံမင်းသမီးအသုံးပြုကြသည်။ ဖယောင်းစက္ကူသုံးပြီးနောက်ပြီး Create နက်ရှိုင်းသောဒီဇိုင်း နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်
အဲဒီနှစျခုနည်းလမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်သတိမပြုမိသည်၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ရာ, တောက်ပလှပမူရင်းပုံရိပ်တွေ၏ခြေသည်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သူတို့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ခြံရောက်စေဖို့သိပ်အချိန်ဖြုန်းချင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်မှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အလွန်သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမှစေ့စေ့နားထောင်နှင့်တူ၏မငယ်ရွယ်မင်းသမီးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းလူကြိုက်အများဆုံး။
အမျိုးသမီးအင်္ကျီ - Fall 2015
Retro ရေကူးဝတ်စုံ 2013
ဖိနပ် - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဦးထုပ် - ဆောင်းရာသီ 2016-2017
လက်သည်း - ရာသီ 2015 ခုနှစ်၏ဖက်ရှင်စိတ်ကူးများ
Egor Tarabasov Lindsay Lohan အတူတက်ခြိုးဖောကျပွီးနောကျအင်တာဗျူးပေးခဲ့တယ်
Purgation များအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် sulfate
တစ်ပါတ်အတွက်5ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန် - လေ့ကျင့်ခန်း
အဝတ်အစား၏ခေတ်သစ်စတိုင်များ - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခြုံငုံသုံးသပ်
ကမ္ဘာ၏9အန္တရာယ်အရှိဆုံးဂိုဏ်း
ကျောက်ကပ်သန့်စင်ရိုးရာကုစား - ကိုအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Horseradish အမြစ် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး